“Federasiona Malagasin’ny Baolina Kitra” izay hitondrana ny lohahevitra : “Antsika Rehetra ny Baolina Kitra Malagasy” ka hametrahana amin’ny rehetra ny fanontaniana : Inona no fanatsarana tianao atao @fifaninanana Baolina Kitra Malagasy karakarain'ny LIGY misy anao ?
dia nanomboka omaly ny fakan-kevitra ifotony isam-paritra havondrona amin’io fotoana io ka ny ligin’i Toamasina no nanomboka izany omaly alatsinainy faha-20 janoary 2020 ary ho tohizan’ny faritany hafa mandritra ity fihaon-dohan’ny herinandro ity. Anisan’ny hanatanteraka ny azy anio talata, ao amin’ny Lapan’ny Faritan’Atsimo Andrefana toerana iasan’ny Governora ankehitriny. Hitarika an’izany, araka ny fantatra, ny mpikambana CE ao amin’ny FMF. Nantsoina hanatrika an’ity fihaonana ity kosa araka ny nambaran’ny filohan’ny ligin’ny baolina kitra any Atsimo Andrefana, Atoa Randrianantenaina Regis, ireo filohana klioba rehetra ao amin’ity faritany ity, ireo filohana seksiona rehetra ihany koa, ireo filoha ligin’ny baolina kitra any amin’iny faritra iny ary koa ireo mpandraraha ara-toekarena any an-toerana. Ny hevitry ny tsirairay tsy an-kanavaka no ho raisina ho fanatsarana ny baolina kitra Malagasy araka ny heviny fa “Antsika rehetra ny Baolina Kitra Malagasy ary Antsika rehetra ny BAREA araka ny tenin’ny filohan’ny FMF, Arezaka Raoul Rabekoto.